Xiddiga Khadka Dhexe Ee Barcelona Andre Gomes Oo Sheegay In Uu Ka Cabsado In Uu Gurigiisa Ka Soo Boxo Wadooyinkana Socdo & Sababta Oo Uu Sharaxay – Kooxda.com
Home 2018 March Spain, Wararka Maanta Xiddiga Khadka Dhexe Ee Barcelona Andre Gomes Oo Sheegay In Uu Ka Cabsado In Uu Gurigiisa Ka Soo Boxo Wadooyinkana Socdo & Sababta Oo Uu Sharaxay
Xiddiga Khadka Dhexe Ee Barcelona Andre Gomes Oo Sheegay In Uu Ka Cabsado In Uu Gurigiisa Ka Soo Boxo Wadooyinkana Socdo & Sababta Oo Uu Sharaxay
Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Barcelona ee Andre Gomes ayaa qirtay in uu ka xishoonayo qaab ciyaareedka uu ku soo bandhigay kooxda Barcelona isaga oo sidoo kale sheegay in uu mar-marka qaar ka cabsoodo in uu ka boxo gurigiisa.
Xiddiga reer Portugal ayaa Barcelona kaga biiray kooxda Valencia xagaagii 2016 iyada oo laga bixiyay 30 milyan oo euro iyo waliba 17 milyan oo ueor ah laakiin waxa uu ku dhibaatooday Camp Nou isaga oo kaliya 3 gool dhaliyay 72 kulan oo uu kooxda u ciyaaray tartamada oo dhan.
Inkasta oo tababare Ernesto Valverde iyo tababarihii ka horeeyay ee Luis Enrique difaacaan 24 jirkan hadana waxa si joogto ah looga dhaleeceeyaa saxaafada halka ay taageerayaasha kooxdiisu ku Oriyaan.
“Waxa laga yaabaa in ayna ahayn kalmadaha ugu fiican ee aan ku qeexi karo nolosha Barcelona waxa ay noqotay cadaab, sababtoo ah waxa aan ku biloday aniga oo cadaadis dareemaya”ayuu Gomes u sheegay Panenka magazine.
“Dareenka aan dareemayo marka aan kulanka ku jiro waa mid xun, in aan wakhti badan fikiro way i dhibaysaa, sababtoo ah waxa aan ka fikiraa wax yaabo xun, inkasta oo ay saaxiibaday si weyn ii taageeraan hadana arimaha ayaan iigu dhicin sidii aan doonayay”.
Gomes oo kaliya 4 kulan ku bilowday horyaalka xilli ciyaareedkan ayaa qirtay in xitaa qaab ciyaareedkiisu saamayn ku yeeshay noloshiisa caadiga ah ee ka baxsan kubada cagta.
“Mar-Marka qaar ma doono in aan guriga ka boxo, dadku way ku soo eegayaan, waxa aan ka cabsadaa in aan wadada socdo ceeb darteed”ayuu yiri.